FANAFIHANA MITAM-PIADIANA MAHITSY : Mpivarotra voatafika, lasa ny vola sy ny entana sarobidy rehetra
Nifanesisesy indray tato ho ato ny trangana fanafihana mitam-piadiana ataona andian-jiolahy maromaro any amin’ny Distrikan’i Mahitsy ka ny Fokontany tao Ambohitsalama sy Fiadanankely no tena lasibatra tamin’izany omaly alina, tokony ho tamin’ny 9 ora. 26 avril 2017
Raha ny fanazavana voaray dia nifanelanelana ora iray ny fanafihana io tanàna roa io nandritra ny alina.
Raha ny tao Ambohitsalama izao dia mpivarotra enta-madinika sy mpivarotra kisoa handeha hody no nifanehitra tamin’izy ireo tamin’io fotoana io. Nanoloana izay dia tsy sahy nanohitra ireo olona noho ny fampihorohoroana nataon’ireo jiolahy tamin’ny zava-maranitra toy ny antsy lava sy basy ka nanaram-po ireo mpangalatra.
Vola mitentina enina hetsy Ariary sy entana tsy lafo maromaro no lasan’izy ireo. Marihina fa tsy voafaritra ny isan’ireo jiolahy ary tsy nisy ihany koa ny aina nafoy. Torak’izany ihany koa ny zava-nisy tao Fiadanankely satria dia tokantrano iray no voatafik’izay ireo ka vola sy entana fampiasa ao an-trano tsy voafaritra ny isany no lasan’ireo jiolahy. Voalaza fa efa mitsoa-ponenana mihitsy aza ireo fokonolona sasany noho ny fahatahorana ireo mpanafika niverimberina tato ho ato. Vokatr’izay dia manao fitarainana ireo mponina any an-toerana amin’izao fotoana izao. Ny antony dia isaky ny vita ny fanafihana vao tonga ireo mpitandro filaminana ka miangavy izy ireo amin’ny tompon’andraiki-panjakana mba hijery akaiky ny zava-misy sy hitady vahaolana.
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (900) 2 mars 2021 Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (448) 5 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (186) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (97) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (95) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (84) 2 mars 2021